Mon Petit Avatar: Another Hound Café
Now who wanted to lose weight? Say what I want is to dropafew pounds and yet I still can’t control my impulse to eat whether at home or at the food court or anywhere. Besides, there is nothing wrong with that, right? If you are planningameal in Bangkok, here is one café that you might want to hit, namely, Another Hound Café, the Italian delicacy with spicy Thai twist. That is where we meet our friend to haveasmall dinner the other day: it started with the appetizers like Bruschetta with Thai style chicken salad and fried ravioli, followed by different spaghettis/baked spinach cheese/ Thai style fish dish, which I likealot by the way, then came what we really needed, caffeine. I do love my Americano and this café, as it really providesarelaxed ambiance. Of course the food there is not on par with my insipid dishes, lol!!!
Posted by Mon Petit Avatar at 3:55 PM
အီတာလျံစာနဲ့ ထိုင်းစာ...၊ အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ပေါင်းစပ်မှု ပါပဲ၊ အဲဒီ ၂ မျိုးလုံးကိုလည်း ကြိုက်တယ်၊ ဒီမှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ရတာ အားလုံး စားချင်စရာတွေ ချည်းပဲ၊ ပြီးတော့ အဆုံးသတ်က ကော်ဖီ...၊ ကဲ..ဘယ်လောက်လှတဲ့ အဆုံးသတ်လေးလဲ...။း)
ဒီလောက်အများကြီး ဘယ်နှစ်ယောက်စားတာလဲဟင်....။ အဟီးး မေးသာမေးတာ ကိုယ်သာဆိုလည်း အဲလောက်မှာစားပစ်မှာ ကြိုက်တယ် အီတာလျံစာရော ထိုင်းရော... မကြိုက်တဲ့ အစာလည်း ခပ်ရှားရှားပါလား....။ ညီမလေးပြောတဲ့ ထိုင်းအချိုပွဲလေးကြုံရင် တင်ပေးနော်....။
Siam Paragon မှာကိုးးးး၊ နောက်တခါ အဲမှာ သွားစားမယ်။ ကြည့်ရတာကို အရသာရှိနေပြီ ခွိ:))
အီတာလျံ နဲ့ ထိုင်း ပေါင်းစပ်ထားတာမျိုးဆိုတော့ ချိစ် နဲ့ အုန်းနို့ တို့ ငရုတ်သီး တို့ သံပုရာသီး တို့ ပေါင်းစပ်ထားသလိုဖြစ်မှာဘဲလို့ တွေးကြည့်တယ်။ ကိုယ်လည်း အဲလို ကပြားဗာရှင်းတွေ လုပ်စားဖြစ်တယ်။ ၀ိတ်ကတော့ အမြဲတိုးနေတယ်မွန်ရေ။
ဒီလိုအရာတွေ စားမှတော့ ဝိတ်မတက်ဘဲ မနေပေါင်
ကိုယ်သာဆိုရင်လည်း ခုလိုအစားအသောက်ကို တွေ့နေရင် မစားဘဲ ဘယ်နေနိုင်မှာတုန်းနော်
အပြင်အဆင်လေးတွေက သပ်ရပ်တယ်နော်။ စားကောင်းမှာလည်း သေချာတယ်။ မမွန်... ရို့စ် ယူနီနဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်ရှုပ်ပြီမို့ ဘလော့ဂ် ခဏပိတ်ထားတယ်နော်။ ပျောက်နေရင် စိတ်မပူနဲ့နော်။ ခင်မင်စွာ
ဒုတိယပုံလေးက အကြော်လေးကို စိတ်ဝင်စားလိုက်တာ၊
Yummy ... YUMMY ... (Italian+ Thai)food
ဟုတ်တယ် ကိုညီလင်းသစ် ကော်ဖီနဲ့အဆုံးသတ်ရတာလှတဲ့အပြင် အရသာလဲရှိတယ်။
မိုးငွေ့ရေ သုံးယောက်စားတာပါ ဒါပေမယ့် တစ်ခုကိုအိမ်ပြန်သယ်လာတယ် မစားမိလို့။ မနက်က အိပ်မက်မက်ပြီးလန့်နိုးတယ်။ မိုးငွေ့လေးကို မုန့်မလုပ်ကျွေးရသေးဘူးဆို ပြီး။ အဟီး။
မမရွှေဇင် ရဲ့ အညာဟင်းတွေကိုလဲကြိုက်တယ်။
မမ ချစ် သွားရင်လိုက်လဲစားပေးပါမယ် ဟီး။
အုန်းနို့ ငရုတ်သီး သံပုရာသီး အပြင်ငံပြာရည်ပါ ပါတယ် အိုင်အိုရာရေ ။ ဒီနေ့တောင်အသိက ဝလုံးလေးလိုပဲတဲ့။ ဒီကလဲ အင်း တခါတလေ ကိုယ်လေးလက်ဝန်ရှိတယ်တောင်ထင်မိတယ် တယောက်စာမကစားလွန်းလို့ဆိုပြီး မျက်နှာငယ်လေးနဲ့။
ဟင်း ချောရေ တို့တွေ စိတ်ရှုတ်လို့လားမသိ အရမ်းစားလာတာကိုး။အစာအိမ်နာလဲအစပ်ကလွဲလို့အကုန်စားလို့ရနေတာကိုးနော်။
ညီမလေး san htun ရေ လာလည်တာကျေးဇူးနော်။
ဟုတ်တယ်နော် အန်တီဦး။ထောက်ခံမဲရပြီ ဟေး။
ညီမလေး Rose အခုလိုပြောတာကျေးဇူးနော်။ အားလုံးအနှောက်အရှက်မရှိပဲ အောင်မြင်ပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်။
အဲတာ ပထမဆုံးစားဖူးတာ အပြုံးပန်းရေ တို့လဲသိပ်ကြိုက်တယ် သိလား။
မမ Sweet ရဲ့မြေအိုးကြက်တောင်ပန်ပေါင်းကိုလဲ စားချင်တယ်။